Burma Partnership » Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (028/2010)
By Network for Democracy and Development • August 8, 2010
USDP party members and residents stated that USDP organizers in Yenanchaung Township, Magwe Division, were provided with funds to runamoney lending business asameans to recruit more members.
Capt. Padoh Saw Hte Nay from the 6th Brigade of KNU stated that some DKBA soldiers from battalions of the 5th Brigade of DKBA under the command of the brigadier Col. Saw La Pwe (aka) Maj. Moustache, joined battallion 18 under the 6th Brigade of KNU. The 5th Brigade, led by Col. Saw La Pwe, has been refusing to transform itself intoaborder guard force, which created tension between the military regime and the 5th Brigade of DKBA
An official of the Kachin State Progressive Party (KSPP) stated that KSPP hopes to get permission from the Union Election Commission at the end of August to contest in the elections
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေ စိုက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော Network for Democracy and Development (NDD) သတင်းနှင့်သုတေသနဌာနမှ နအဖ၏ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေနေ အဖြစ်အပြက်များကို အပတ်စဉ် ရှာဖွေ စုစည်း ဖြန့်ဝေလျှက် ရှိပါသည်။ ထိုအပတ်စဉ် မှတ်တမ်းတွင် နအဖနှင့် ကြံ့ဖွံ့ တို့၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ထားသော အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြန်တွင်းပြည်ပမှ ပြည်သူလူထုတို့၏ လှုပ်ရှားမှု များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
ရေနံချောင်းမြို့တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကပါတီစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် စည်းရုံးရေးမှုးများအား ငွေချေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အရင်းအနှီးထုတ်ပေးနေသည်ဟု ပါတီဝန်များနှင့်ဒေသခံများက ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကော်မတီ CRPP က စစ်အစိုးရကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို ပြည်သူလူထုအားပညာပေးရန်အတွက် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် NLD ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး နေအိမ်တွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
Download this week’s report in Burmese and in English
Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events
This post is in: 2010 Elections, Military Regime